सांसदको प्रश्नमा गृहमन्त्रीको जवाफ– बालुवाटार होस कि सिंहदरबार, निर्मलाका हत्यारा जहाँ भएपनि कठघरामा आउँछन् – Everest Dainik – News from Nepal
सांसदको प्रश्नमा गृहमन्त्रीको जवाफ– बालुवाटार होस कि सिंहदरबार, निर्मलाका हत्यारा जहाँ भएपनि कठघरामा आउँछन्
काठमाडौं, व्यवस्थापिका संसदको विशेष प्रश्नोत्तर सत्रमा निर्मला पन्तको हत्या घटनामा सरकारले जारी राखेको अनुसन्धानका बारेमा गृह मन्त्रीको जवाफ माग गरिएको छ ।
सांसदहरुले सदनमा सरकारले अहिलेसम्म अपराधी पत्ता नलगाएकोमा आपत्ती व्यक्त गरे ।
कसले के सोधे त ?
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राऊ गरी मुद्दा किन चलाइएन, देशभरी बलात्कार र हत्या हिंसाका श्रृंंखला कहिले रोकिने हो ? निर्मला पन्तको बलात्कापछि हत्या भएको ६ महिना भयो । कुनै पनि बलात्कारको घटनामा लुगा मुख्य प्रमाण हुन्छ । प्रमाण लोप गराउने काम सरकारले किन गर्यो ? निर्मला पन्तका हत्यारा बालुवाटार र सिंहदरबारको कुर्सीमा छन भनेर आरोप लगाइएको छ, कहाँ छन् जवाफ चाहियो ।
निर्मला हत्या प्रकरण निश्चय पनि पाशविक हत्याकाण्ड र जघन्य अपराध थियो । यसबारेमा सदनमा जानकारी गराइसकेको छु । यससम्बन्धमा अनुसन्धान जारी छ । सरकार यो विषयमा अत्यन्तै गम्भीर छ । र, अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढको छ । माननीय सांसदले उठाउनु भएको योसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई किन कार्वाही गरिएन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीको लापर्वाही गर्ने प्रहरीलाई कार्वाही गरिसकेको छ । कुनै पनि अपराधी या अपराधसँग व्यक्तिलाई राज्यले कुनै छूट दिन सक्दैन । अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउने नै छ । यो चासो र चिन्ता जाहेर गरेको छ सदनले । हामीले अनुसन्धान तीब्र गतिमा अघि बढाएका छौं ।
महिलासंग देशमा घटेका घटनामा ९६ प्रतिशत घटनामा अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सफल भएको छ । ३, ४ प्रतिशत अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन सरकार प्रयासरत छ । सरकारले, प्रहरीले अपराधी पत्ता लगाउन केही समय लिन्छ । यो प्रकरणले पनि केही समय लिएको छ । तैपनि सरकार अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउन प्रयासरत छ । अपराधी बालुवाटारमा छन कि सिंहदरबारमा छन भन्ने प्रश्न उठाएका छन्, जहाँसुकै भएपनि पक्राउ पर्ने र पीडितले न्यायाय पाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।
निर्मला पन्तको हत्याको अपराधीलाई रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्रीलाई सार्वजजिनकरुपमा बोल्दै ५ दिन भित्र हत्यारा पक्राउ हुन्छन भनेर ५ महिना अघि भन्नुभएको थियो । सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरालाई गृहमन्त्रालयको के भनाई छ ? यो कुरा गृहमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन ?
गृहमन्त्रीः रक्षामन्त्रीले के कसरी भन्नु भएको हो मलाई थाहा छैन । तर वहाँले यो भन्नुभएको भए राम्रो नियतले अपराधी पक्राउ पर्नुपर्छ भन्ने आशयले भन्नु भएको हुनसक्छ । तर हामीले यो घटनामा विशेष अनुसन्धान गरेका छौं । यो अनुसन्धानका क्रममा कतिपय अवस्थामा प्रहरीले संदिग्धहरुलाई पक्राउ पर्ने र तिनीहरुको यो वा त्यो सम्बन्ध देखिने अवस्थामा अनुसन्धानमा तीब्रता देखेर सोही अनुरुप छिटै अपराधी पक्रिन्छ भनेर रक्षामन्त्रीले भन्नुभएको होला भनेर भन्न सकिन्छ ?
दिलेन्द्र बडुः ती बाँकी ४ प्रतिशत कहिले पक्राउ पर्छन ? अनसनमा बस्नेलाई किन धम्क्याइन्छ ?
गृहमन्त्रीः अनसनमा बसेका या न्यायका लागि आन्दोलन गर्नेहरुलाई गृहबाट धम्क्याउने प्रश्नबारे हामीलाई सूचना छैन । आन्दोलन गर्ने अधिकार जनताको हो । पीडितले न्यायको आवाज उठाउन सक्छन । गृहको कुनै निकाले धम्क्याएको जानकारी छैन । त्यसो भएको हो भने हामी कार्वाही गर्ने छौं । शतप्रतिशत कहिले हुन्छ भन्नेमा आशावादी बनौं । अपराधीहरुलाई यो बीचमा सयौं अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याएका छौं । सुन प्रकरणमा पनि दुईचारदिन भित्र उनीहरु कानुनको कठघरामा आएका छन् । आशा गरौं, हामी सतप्रतशत अपराधी नियन्त्रण गर्न सफल हुने छ ।
गृहमन्त्रीज्यूले नै अपराधी पत्ता लागिसक्यो भन्ने जवाफ आएको थियो । तर अहिलेसम्म अपराधी त के अनुसन्धान नै कहाँ पुगेको छ थाहा छैन । शंकाष्पदलाई पक्रिदैमा अपराधी पत्ता लाग्यो भनियो । अभियोग र बयान साबिती गर्दैमा अपराधी हुँदैन । त्यसलाई प्रमाणले पुष्टि गर्नुपर्दैन ?
गृहमन्त्रीः मैले शुरुमा निर्मला प्रकरणबारे सदनलाई जानकारी दिँदा गृहलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा अवगत गराएको थिए । राज्यले शुरुदेखि नै पहलकदमी लिएको थियो । शुरुदेखि नै सिआईबीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाएको थियो । त्यसले प्रेषित गरेको सूचनाका आधारमा सदनमा जानकारी गराएको थिएँ । तर छानबीनमा अरु कुरा प्रमाणित नभएपछि मुक्त गरिएको थियो । निश्चय पनि तलबाट सूचना आउँदा अधुरो हुनसक्ने भएकोले यसमा राज्यले गम्भीरता लिएको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको छ । यो विषय मानवाधिकारवादी र मिडियाका लागि गरिखाने बाटो भएको छ भने विपक्षीका लागि बिरोधको मौका मिलेको छ । दिलिप सिंह विष्टलाई कसले त्यसरी राखेको थियो भन्ने विषयमा पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
ट्याग्स: Nirmala Pant, Ram Bde Thapa